motorola inotanga kuyedza soak kune moto x yakachena edition Android 6.0 marshmallow kugadzirisa
Kuru Nhau & Ongororo Motorola inotanga kuyedza bvunzo yeMoto X Yakachena Edition Android 6.0 Marshmallow kugadzirisa
Motorola inotanga kuyedza bvunzo yeMoto X Yakachena Edition Android 6.0 Marshmallow kugadzirisa
Mavhiki mashoma apfuura, David Schuster, Motorola & apos; s Senior Director weSoftware Chigadzirwa Management, akazivisa kuti iyo Android 6.0 Marshmallow inogadziridza iyo Motorola Moto X Pure Edition iri munzira. Nhasi, Schuster akazivisa kuti Motorola yatanga iyo soak test yeiyo yekuvandudza.
Mwedzi wapera, mishumo yakaratidza kuti mamwe maMoto Motorola Moto X Pure Edition mayuniti akatanga kugamuchira yavo Marshmallow kugadzirisa. Pakutanga, zvaitendwa kuti Motorola yaiburitsa bvunzo, asi Motorola Schuster yakaramba pfungwa iyi, ichiti yaive ingori nyore bvunzo-dhiraivha . Ino nguva kutenderera, zvisinei, iyo chaiyo soak bvunzo yatanga.
Kana zvese zvikaenda zvinoenderana nehurongwa hweMotorola & apos; kuzarura kwakazara kunozotevera munguva pfupi. Mukufunga, izvi zvinofanirwa kureva kuti Moto X Yakachena Edition ichatanga kugamuchira yayo Android 6.0 Marshmallow kugadzirisa mune imwe vhiki.
Sezvo vazhinji vangangove vatoziva kare, iyo Motorola Moto X Yakachena Edition haina zvimwe kunze kweiyo US vhezheni yepasi rose Moto X Style. Iyi yepasi rose misiyano yefoni yakatotanga kugamuchira yayo Android 6.0 Marshmallow kugadzirisa mune mamwe makona epasi .
Zvichienzaniswa ne Android 5.1 Lollipop, inova iyo Android vhezheni iyo Motorola Moto X Yakachena Edition irikushandisa parizvino, iyo 6.0 Marshmallow vhezheni yeGoogle & apos; s mobile OS inouya pamwe nekuvandudzwa kwakakosha senge iyo nyowani Google Zvino paTap, mhando yemvumo yegranular, yakagadziridzwa vhoriyamu zvinodzora, pamwe neyakajeka bhatiri yekuchengetedza chinhu chinonzi Doze Kuti uwane rumwe ruzivo nezve iyo nyowani OS vhezheni, tarisa yedu Android 6.0 Marshmallow ongororo .
Motorola Moto X Yakachena Ongororo
mabviro: David schuster kuburikidza GSMArena
cricket nhema chishanu madhiri 2018
uchienzanisa zvinyorwa zviviri mu python
Samsung Galaxy S8 / S8 + uye Cherechedzo 8 yekuvandudza inowedzera yekumusoro skrini kutenderera sarudzo
Spotify Collaborative Playlist inowana nyowani maficha: kugadzira playlists pamwe chete neshamwari dzakaitwa kunyange nyore
Akanakisa Amazon Prime Day Makaralı Mahedhifoni
Kugovera kweDisney + account kunotenderwa kwechinguva, ingo usatomboishandisa zvisizvo
Sprint iri kuvhara Virgin Mobile pasi mukutarisira kubatanidzwa kweT-Mobile
Deal: T-Mobile inoita kuti iwe utenge 2 Galaxy S8 mafoni pamutengo we1
T-Mobile kuenda pamudyandigere Sprint & apos; s 3G CDMA network mukutanga kwa2022 - chirevo
Walmart & apos; s Cyber ​​Muvhuro kutengeswa kune madhiri pane iPhone 8 uye iPhone 8 Plus